The Croods (2013) | MM Movie Store
ဂရုဈ ဆိုတဲ့ ဂူအောငျးလူသားကွီးကသူ့မိသားစု ၆ ယောကျကို ဘေးရနျတှကေကာကှယျပေးပွီး စောငျ့ရှောကျလာတာ နှဈတှကွောခဲ့ပွီးသမီးလေး အိဗျတောငျ အရှယျရောကျခဲ့ပွီပေါ့…
ဒီအခြိနျမှာပဲ ဂိုငျး ဆိုတဲ့ ကြောကျခတျေလူသားကောငျလေး တဈယောကျက ပေါကျခလြာပွီးကမ်ဘာကွီး ပကျြမယျ့ အကွောငျးတှေ ပွောပွပွီးမီးကို စတငျ ဖနျတီးပွတော့တာပဲဂိုငျး က သူတို့ နဲ့ မတူတဲ့ အခကျြ ရှိတယျ
သူက မကွောကျတကျသလို တီထှငျဖနျတီးတကျတယျဂရုဈ တို့ အုပျစု ကွ တဈခုခုဆို ဂူထဲ ပဲ ပွေးအောငျးတကျကွတာဒီမှာပဲ ဂရုဈ သဘောမကပြမေဲ့ သူ့မိသားစု က ဂိုငျး ရဲ့ လမျးပွမှုနဲ့ကမ်ဘာပကျြဘေးက လှတျမယျ့နရောကို စတငျ ထှကျကွတော့တာပဲ
ဒီဇတျလမျးမှာ ဘာတှေ တှရေ့လဲ ဆိုတော့ မိသားစု စိတျဓါတျရယျအဖတေဈယောကျ ရဲ့ စိုးရိမျမှုတှေ ပူပနျမှုတှေ အပွငျအသကျရှငျနထေိုငျဖို့ ဘာက အရေးကွီးလဲ ဆိုတဲ့ သော့ခကျြကိုပွသှားတာ အကွိုကျဆုံးပါပဲ….
ကနြျော ရုပျရှငျတှေ ကွညျ့ဖွဈရငျ ဒီရုပျရှငျက ဘာပေးလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို ရှာမနပေဲ စိတျအပနျးဖွဖေို့ အတှကျပဲ ကွညျ့လေ့ ရှိပါတယျဒီ Croods ကတော့ စိတျအပနျးဖွဖေို့ အပွငျ လူရဲ့ စိတျအဟာရကိုဖွညျ့ဆညျးပေးလို့ ကလေးရော လူကွီးပါ ကွညျ့သငျ့ပါတယျ
Croods2ထွက်တော့မှာဆိုတော့Croods ကို ပြန်နွေးတဲ့ အနေနဲ့ ကြည့်မိတယ်ဂရုစ် ဆိုတဲ့ ဂူအောင်းလူသားကြီးကသူ့မိသားစု ၆ ယောက်ကို ဘေးရန်တွေကကာကွယ်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်လာတာ နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီးသမီးလေး အိဗ်တောင် အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့…
ဒီအချိန်မှာပဲ ဂိုင်း ဆိုတဲ့ ကျောက်ခေတ်လူသားကောင်လေး တစ်ယောက်က ပေါက်ချလာပြီးကမ္ဘာကြီး ပျက်မယ့် အကြောင်းတွေ ပြောပြပြီးမီးကို စတင် ဖန်တီးပြတော့တာပဲဂိုင်း က သူတို့ နဲ့ မတူတဲ့ အချက် ရှိတယ်
သူက မကြောက်တက်သလို တီထွင်ဖန်တီးတက်တယ်ဂရုစ် တို့ အုပ်စု ကြ တစ်ခုခုဆို ဂူထဲ ပဲ ပြေးအောင်းတက်ကြတာဒီမှာပဲ ဂရုစ် သဘောမကျပေမဲ့ သူ့မိသားစု က ဂိုင်း ရဲ့ လမ်းပြမှုနဲ့ကမ္ဘာပျက်ဘေးက လွတ်မယ့်နေရာကို စတင် ထွက်ကြတော့တာပဲ
ဒီဇတ်လမ်းမှာ ဘာတွေ တွေ့ရလဲ ဆိုတော့ မိသားစု စိတ်ဓါတ်ရယ်အဖေတစ်ယောက် ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ပူပန်မှုတွေ အပြင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ဘာက အရေးကြီးလဲ ဆိုတဲ့ သော့ချက်ကိုပြသွားတာ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ….
ကျနော် ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖြစ်ရင် ဒီရုပ်ရှင်က ဘာပေးလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို ရှာမနေပဲ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အတွက်ပဲ ကြည့်လေ့ ရှိပါတယ်ဒီ Croods ကတော့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အပြင် လူရဲ့ စိတ်အဟာရကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ ကလေးရော လူကြီးပါ ကြည့်သင့်ပါတယ်
CJ7(2008)